, मधुमेह रोग लागेमा के खाने ?
खानपिनमा लापरबाहीको प्रतिफल भनेकै मधुमेह भन्ने रोग हो
मधुमेह रोग लागेमा के खाने ? आज हरेक घरमा यस्ता रोगी भेटाउन सकिन्छ । खानपिनमा लापरबाहीको प्रतिफल भनेकै मधुमेह भन्ने रोग हो । यस्ता रोगमा के कस्ता खाना खानाले रोग निको हुनसक्छ भन्ने जानकारी हुन सकेमा राम्रो फाइदा हुने देखिन्छ । रगतमा चिनीको मात्रा बढी हुने भएकाले मधुमेहका रोगीले जे पायो त्यही खानेकुरा खानहुँदैन ।
यो एक दीर्घरोग भएकाले रोगीले खाना खाँदा निक्कै होस पुर्याएर खानुपर्छ । यसका साथै यस्ता रोगीले सीमित खानेकुराहरु नियमित र ठिक्क मात्रामा खान आवश्यक छ । आज हामीले मधुमेहका रोगीले खानेकुराको बारेमा जानकारी दिँदैछौं जुन मधुमेह नियन्त्रणका लागि खान आवश्यक छ ।
नास्पातीजस्तो देखिने फल एभोक्याडो स्वास्थ्यका दृष्टिले निक्कै राम्रो मानिन्छ । मधुमेह र एभोक्याडो बीच निक्कै सकारात्मक सम्बन्ध रहेको छ ।
माछामा ओमेगा ३ फ्याटी एसिड पाइने हुँदा यसले असामान्य मुटुको धड्कन को जोखिमलाई कम गर्ने गर्दछ । मधुमेहका रोगीले माछाको सेवन गर्नु लाभदायक मानिन्छ ।
नोट : हरेक मधुमेहका रोगीले खानपिनमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भने आधा रोग त्यसै निको हुनसक्छ भनेको छ । उपचार गर्दा रोग निको हुनमा जति आवश्यक औषधिको छ त्यो भन्दा बढी खानपिनको आवश्यक भएको हुनसक्छ । मधुमेह लागेको थाहा हुनासाथ डाक्टरको परामर्शमा उपचार गराइहाल्नुपर्छ ।
आइपिएलमा कोलकाताको पहिलो जित, कोलकाताले ७ विकेटले हरायो हैदरावादलाई